बूढानीलकण्ठ कार दुर्घटना : मापसे गरेर चलाएको कारमा को थिए ती दुई युवती ? –
काठमाडौँ – गत शनिबार बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ बसपार्क नजिकैको सडकमा एउटा कारले ठक्कर दिँदा गोरखा घर भएकी लिला देवकोटाको मृत्यु भयो । देवकोटालाई ठक्कर दिने गाडी चालक हुन् पृथ्वी मल्ल ।
सामाजिक सञ्जालमा समेत बुढानिलकण्ठ दुर्घटनालाई विभिन्न तरिकाले टिकाटिप्पणी गरिएको छ । कोहीले गाडीमा रहेका अन्य तीनजना को–को थिए रु भनेर चासो गरेका छन् ।
कारमा रहेका अन्य २ जना युवती को थिए त रु उनीहरु कहाँ भागे रु प्रहरी किन उनीहरुको नाम बताउन चाहँदैन रु पटक–पटक प्रहरीलाई सोध्दा पनि प्रहरी किन उनीहरुको नाम भन्न आलटाल गरिरहन्छ ?
सबैको चासोको विषय रहेको कुरामा प्रहरी यस्ता घटना लुकाउँछ रु किन तत्पर हुन्छ रु भीआईपी परिवारको घटना हो भन्दैमा प्रहरीले यस्ता कुराहरु लुकाउनु कतिसम्म न्यायोचित छ ?
प्रहरीका अनुसार कारभित्र रक्सीका बोतल समेत भेटिएको थियो । तर, कारभित्र गाँजा नभेटिएको प्रहरी बताउँछ । यद्यपी, बुढानिलकण्ठ दुर्घटनाबारे महानगरीय प्रहरी प्रभाग बूढानीलकण्ठले पनि राम्रोसँग प्रतिक्रिया दिएको छैन । रातोपाटिबाट साभार
« मेची पुलमा एकैपटक जब १७ वटा राष्ट्रिय झन्डा फहराइयो
महाथिर मोहम्मदले फेरि गरे भारतको आलोचना »